कार दुर्घटनामा परिन् ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर–२’ कि नायिका «
कार दुर्घटनामा परिन् ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर–२’ कि नायिका
Published :4June, 2018 6:28 pm
पुनित मल्होत्रा निर्देशित चलचित्र ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर–२’को सुटिङका लागि मसुरीमा रहेकी बलिउड अभिनेता चंकी पाण्डेकी छोरी अनन्या पाण्डेले चलाएको कार दुर्घटना भएको छ । दुर्घटना सुटिङकै क्रममा भएको बुझिएको छ ।
चलचित्रको एक दृश्यमा अनन्याले कार चलाउनुपर्ने थियो । सुटिङ चलिरहँदा कारको नियन्त्रण अनन्याको हातबाट छुटेर कार एउटा रुखमा ठोक्किएको हो । कार चलाउने क्रममा अनन्याले सेफ्टीगार्ड लगाएको हुनाले उनलाई धेरै गहिरो चोट भने नलागेको बताइएको छ ।
उनी स्टुडेन्ट अफ द इयरको सिक्वेलमा, अनन्या, टाइगर श्राफ र तारा सुतारिया मुख्य भूमिकामा छन् । अनन्या र तारा दुवैको यो डेब्यू चलचित्र हो । चलचित्रको आधाभन्दा धेरै सुटिङ सकिएको बताइएको छ । उक्त चलचित्रमा वरुण धवन र सिद्धार्थ मल्होत्राको क्यामियो रोल हुने बताइएको छ ।
सुत्नु भन्दा आगाडी मनकामना को दर्सन गरि आजको राशिफल पद्नुहोस।
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो—– नयाँ कार्यको योजना बन्नेछ । नजिकको
एटीएम मेसिन तोडफोड गर्दा दुइ युवा पक्राउ !
घोराही बजारमा रहेको कुमारी बैंक लिमिटेडको एटीएम मेसिन तोडफोडमा संलग्न दुई युवा पक्राउ परेका छन्
पछिलो २४ घण्टामा देशभर दुइ हजार ५६८ जना संक्रमित थपिए, २ हजारभन्दा बढी संक्रमणमुक्त !
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपाल २ हजार ५ सय ६८ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको
सुत्नु भन्दा आगाडी मनकामना को दर्सन गरि आजको राशिफल
पछिलो २४ घण्टामा देशभर दुइ हजार ५६८ जना संक्रमित
भक्तपुर अस्पतालमा एकैदिनमा तीन संक्रमितको मृत्यु !